KYAW CHAN NYEIN: Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part3- B)
Emotion Management & Mindful Compassion တရားပွဲသင်တန်း (Part3- B)
🔯 အမေရိကားက ဝိပဿနာ ပြတဲ့ဆရာမကြီးတစ်ယောက် -
★ သူ့စာအုပ်ထဲမှာ မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းအကြောင်း သူရေးထားတာရှိတယ်။ သူက ကျေးဇူးရှင် ရွှေဥသြဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ပါ။ ဆရာတော်ကြီး သူ့ကိုသင်ထားတဲ့ဟာကို ပြန်ပြောပြတာ။
“လူ (၄)ယောက်ရှိတယ် -
• မိသားစုဝင်က တစ်ယောက်၊
• သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်၊
• ပြီးတော့ ရန်သူတစ်ယောက်”။
★ အဲ့ဒီလေးယောက်ကို ဓားပြ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ တစ်ယောက်တောင်းတယ်။
အဲဒီ တစ်ယောက်ကို သတ်ပစ်မယ်။
★ မဟုတ်ရင် အကုန်လုံးကို သတ်ပစ်မယ်လို့ပြောတယ်။
★ အဲဒီနေရာမှာ တစ်ယောက်ပေးဖို့ ကိုယ့်ကိုရွေးခိုင်းရင် မေတ္တာရှိတဲ့ (မေတ္တာအားကြီးတဲ့) ပုဂ္ဂိုလ်က....
Give in လုပ်မယ့်အစား၊ အလျှော့ပေးမဲ့အစား တစ်ခြားနည်းလမ်း ရှာမယ်။
★ အဲဒီအခါကျမှ “ဒိဋ္ဌာ ဝါ ယေ ဝ အဒိဋ္ဌာ၊ ယေ ဝ” မြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ သိကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ မသိကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊
"ဒူရေ ၀သန္တိ အ၀ိဒူရေ"
★ တချို့ကျတော့ အနီးမှာနေရင် မေတ္တာရှိတယ်၊ အဝေးမှာနေရင် မေ့သွားတယ်။
★ Time and Space (အချိန်နဲ့ နေရာဒေသ အကွာအဝေး) က ဒီ Emotion (စိတ်ခံစားမှု) ကို effect (အကျိုးသက်ရောက်မှု) ဖြစ်တယ်။
Space ဆိုတာ နေရာခြားသွားတာ၊ Time အချိန်ကြာသွားတာ။ အဲ့ဒါတွေက emotion ကို impact ရှိတယ်။ Emotion အပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။
★ ဒါကြောင့် “မေတ္တာသုတ်”မှာ “ဒိဋ္ဌာ ဝါ ယေ ဝ အဒိဋ္ဌာ၊ ယေ ဝ” ဆိုတာ မြင်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်၊ မမြင်ရသေးတာဖြစ်စေ၊ မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ မမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်၊
“ဒူရေ ၀သန္တိ အ၀ိဒူရေ” နီးနီး ဝေးဝေး၊ ကြီးကြီးသေးသေး အမျိုးမျိုးခွဲပြထားတယ်။
• ဒါက ငါ့သူငယ်ချင်း၊ ငါ့မိတ်ဆွေ၊
• နံပါတ် (၄)က ဒါက ဘာမှမဆိုင်တဲ့ သူ၊
• နံပါတ် (၅)ကျတော့ ဆိုင်ပြန်ရော - ရန်သူ
သူကျတော့ ဒေါသနဲ့ဆိုင်တာ။ သူဆိုင်တာက တစ်မျိုး၊ ဒေါသနဲ့ ဆိုင်တာ။
• နောက်ဆုံး နံပါတ် (၆)ကကျတော့ တစ်လောကလုံးနဲ့ဆိုင်တာ။
ဒီလို ခွဲခြားမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ Emotion (စိတ်ခံစားမှု) အပေါ်မှာ Manage (စီမံမှု) မလုပ်နိုင်လို့ဘဲ။
★ Emotion ကို Manage လုပ်နိုင်တဲ့ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကျတော့ လူတွေကို Emotional Block နဲ့ ခွဲခြားတာမျိုး (Classify လုပ်တာမျိုး) မလုပ်တော့ဘူး။
★☆ ဘယ်လိုပဲမြင်သလဲဆိုတော့ လူတွေအားလုံးက ဒုက္ခတွေပဲ။
ဒါကြောင့် လူတိုင်းအပေါ်မှာ ကရုဏာရှိတယ်၊ သူတို့ကောင်းတာ လုပ်တယ်ဆိုရင် မုဒိတာဖြစ်တယ်။
★ ဒီနေ့ Positive Emotion ဆိုတာ မုဒိတာကို ပြောတာ။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးထဲက မုဒိတာကိုပြောတာ။
ခုနက မိနစ် (၃၀) တရားထိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါက ကိုယ်လုပ်ထားတာကို ကိုယ်ပြန်ပြီး မုဒိတာဖြစ်ဖို့၊ To rejoy things …. something that you can be proud. Good Feeling ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်။